Robotrading okanye Trading manual - Blockchain News
EyoMqungu 24, 2018 admin
Robotrading yinkqubo usebenzisa iseti imiyalelo zokubeka bid ukuba athenge okanye athengise izabelo, imali, okanye cryptocurrency. Le mfundo isekelwe kwizalathisi ezahlukeneyo kwimarike, kubandakanya inani, ixesha, umthamo, kunye nabanye. Xa bakwaKanan ukukhathala Andinaxesha lokuthengisa ngesandla, bacinga ngayo ukuya robotrading. Kodwa ke umbundu ukuba angene kule ndawo kakhulu eliphezulu, ingakumbi umntu akukho zemfundo ezizodwa zemali okanye lobuchwepheshe.
Malunga inguqu ukuba robotrading kunye nexesha free
Ukuba ngaba umtyali-mali zabucala ugxile enzuzweni, uyayiqonda umahluko phakathi yorhwebo manual ne ezenzekelayo, kwaye ezinye izakhono lokuprograma, ukuba ubuncinane kufuneka ucinge malunga nokusebenzisa yimiqolo oluzenzekelayo. Ukusebenza kunye nesiqulatho umsebenzi ziyanda: abantu nje enze ngcono. Xa urhwebo ngokuzenzekelayo uyakwazi kukugubungela Exchange ngaphezulu, usebenzisa izixhobo ngaphezulu kunye namacebo. Kodwa ke oko akuthethi ukuba akukho mfuneko ukuba esweni imisebenzi oluzenzekelayo njengabantu manual. Musa ukulibala malunga esweni, kusoloko kubalulekile ukuba ugcine amehlo akho avuleke.
nayiphi trade, nokuba manual okanye algorithmic, kufuna umzamo kunye nokubandakanyeka ngokupheleleyo kwinkqubo. Ukuba ufuna ukwamkela, kufuneka achithe ixesha elininzi kwi yorhwebo. Kungakuhle, kufuneka ube nosuku ukusebenza ngokupheleleyo, xa ukwazi nje ukuba ukubhala ikhowudi nihambe ukhululeke. Kanjalo, akuyi iqhotyoshelwe nje endaweni enye, uya kuba nako ukujikeleza ehlabathini kodwa kuphela xa wena uhlala intanethi. Kodwa ngokuqinisekileyo hayi malunga lulele ngomoyakazi phantsi komthi wesundu iintsuku.
Malunga imali eyake kunye cryptocurrency
NgokoMthetho zokuhlela, akukho mahluko phakathi koko wena urhwebo, alibhekiseli imali okanye cryptocurrency. Eyona nto ibalulekileyo kukuba ukwenza inkqubo elungileyo urhwebo mishini. Kukho ubuchule ezinokuthi zisetyenziswe ngempumelelo nokuba kunye nemali eqhelekileyo, cryptocurrencies, ibone stock. Oku kubaluleke into sixhobo isicelo entry. Into ebalulekileyo kukuba ingaba okanye hayi imithetho vule kwi algorithm zichaza ukuziphatha isixhobo akhethelwe. Ngoko ke nanku umbuzo okokuqala kuqulunqo mbono zorhwebo kunye neqhinga. Nangeyiphi ndlela, xa algorithm iyakhula, indlela yokuziphatha kwe asset yorhwebo ethile kuthathelwa ingqalelo.
malunga nenzuzo, ubungozi amaphutha yobudenge
Esinokusibambisa borhwebo automated phezu yorhwebo kwalomqulu asiyondlwana ukunqongophala iimvakalelo. Abantu badla ukwenza izigqibo ezisekelwe iimvakalelo kunye neemvakalelo kwaye ayisoloko kuba nempembelelo entle iziphumo, ingakumbi ngamaxesha anzima. Okuchasene, i algorithm owenza nje umsebenzi wayo ngaphandle iimvakalelo okanye uchulumanco; akuthathi izigqibo ukungxama kunye evula-qhinga elikhankanyiweyo ngokungqongqo. Ke ukuba algorithm waqala, umrhwebi ayikwazanga nokungenelela utshintshe into.
Kanjalo, kukho imingcipheko, kwaye idla ngokuba imingcipheko market. Le mbono algorithm urhwebo ukuze bayeke imivuzo ngaxa lithile xa naziphi na iziganeko ongeke neentlekele zenzeka kwi kwimarike. Uninzi robots ayifumani mkhondo uphawu. Kuya kufuneka ukuba ukulandelela le meko kwaye utshintshe iirobhothi yakho ngexesha okanye ukukhubaza kuzo. Kukho kwakhona umngcipheko encinane exchange kukuyekela.
Ngaphezu, program ukuba maxa wambi ukwenza iimpazamo abafazazana abazono kodwa onondiliseko. A algorithm esilula iindleko kunye nexabiso. Kanjalo, ukuze yenze ingeniso, ixabiso yakho kufuneka ibe ngaphezulu kuno iindleko zakho. Ukuba ufuna siphambanise kubo, robot yakho iya kuba azincedi lutho. Ngokufuthi newbies bajamelene nale ngxaki. Nje ngeziphumo, impazamo elula kakhulu kulo naliphi na inqanaba kubangela ilahleko emikhulu.
Naziphi na izakhono ezithile ziya kuba luncedo kakhulu. Ngokuthi naziphi na izakhono ezithile, ngokuyintloko kuthetha ulwazi kakuhle kwimathematika logic. Yinto kakhulu malunga logic ecacileyo kunye nokuqonda indlela yokubhala urhwebo ulawulo olusesikweni kunokuba malunga kwimathematika kuba akukho mfuneko naziphi utshintshwano aljibra kumanqanaba okuqala. Kukho umahluko ocacileyo phakathi imvakalelo ukurhweba ngayo kunye nokukwazi ukuchaza logic trade iseti esesikweni kweziganeko kunye nezenzo. Kule nyathelo, kufuneka sibe nolwazi lwemathematika. kwakhona, izakhono kweenkqubo kunye umyalelo iilwimi esisiseko inkqubo (umzekelo, “i C”) kubalulekile.
Ngamanye amaxesha kubonakala ukuba kuza nesicwangciso nenzuzo, emangalisa nokusebenza mbono sorhwebo. Nizilinganisele phezulu nayiphi na iprogram umzekelo izibalo, njengokuba, Mathcad. ke, ujonga data, ukuyila umfuziselo data, yaye benze izibalo ezifunekayo. Emveni kwalonto, ukuba zibandakanya zonke neekhomishini kunye neentlawulo ezongeziweyo, kwaye yonke into isebenza kakuhle. Kunjalo nje, ngaphandle kokuba, musa kid ngokwakho, zibandakanya zonke iintlawulo, nto kubalulekile. Kodwa ke ukuba ukuphunyezwa yobugcisa kwengcinga yakho kufuneka imali ngaphezu kokuba uzuze kule mbono.
Ngeminazana ithile, wemali enye yabucala wenza urhwebo irobhothi omangalisayo, ogama Panda. It yenza 8,000% ukubuyela phezu ngexesha kwiinyanga ezintathu phantse ingozi lokuqala. Panda kwakuxoxwa kwaye hyped lukhulu, kodwa ngokwenene esebenza kakuhle. Kodwa le nto ukuba irobhothi wenza oku imali eyinkunzi ekuqaleni 1 amawaka, lo gama inkxaso ngenyanga yonke iziseko zobugcisa ezifunekayo ukugcina iindleko zeprojekthi kujikelezwa 10 amawaka. Ngaloo ndlela, kwaba ekuqaleni iprojekthi engeluncedo lwanto, kuba asizange yokuhlawula zonke iindleko zombane, iiseva ezinamandla kunye neekhompyutha zokwenza izibalo yeprojekthi Ingakumbi, umntu kufuneka akhumbule ukuba ingeniso robot alusoloko phezulu, kodwa imali yesondlo eza kuhlawulwa chu. ke, kubalulekile ukubala nje kuphela indlela uthole, kodwa unayo kangakanani ku tirhisa ukuze bafumane.
imali Malunga ne-fast
Kucacile ukuba iirobhothi ingaqwalaselwa ngokwahlukileyo, kuxhomekeka kumthamo yorhwebo, yintoni eyenza kunye mboleko asetyenziswa xa urhwebo, utyala imali uwedwa okanye egameni umntu ukuba, etc. Kukho iweb eninzi kujonge. Kodwa jikelele, uzokwazi kancinane, kancinane qho ngonyaka nge phantse akukho iingozi ngokuthi kokuhlawulwa iminyaka elishumi kwi 10% ngonyaka ngamnye, okanye azame ukurhweba unyaka omnye 100%.
Kodwa kukho umthetho kwimarike stock ukuba akayi kuba nako bakopele - oluphezulu ukubuyiselwa enokubakho, inkulu ingozi enokwenzeka. Yinto nje obeliqele ulawulo kwaneliswe nemfuno. ke, xa ubala imali enkulu, ukulungela iilahleko ezinkulu. Lo mthetho akunakuphepheka kwaye kufuneka ithathelwe ingqalelo xa kuziwa ubuye mali (ROI) okanye algorithmic inzuzo sorhwebo.
Malunga ziseko newbies
Kukho ezinye maqonga ukuba avumele nabani na ukuba ukurhweba ngaphandle kwezakhono Trading. Umzekelo, Libertex liqonga edume kakhulu, kodwa kukho abanye abaninzi. It is a ukhetho Kumlungele newbie ukuzama ukubona yonke imisebenzi nendlela.
Post Previous:Blockchain News 24 EyoMqungu 2018
Post Next:Umvumbo umqhubi Intlawulo uyala Bitcoin